Global Voices teny Malagasy » Filipina: Maniry Ny Hisian’ny Lalàna Ho Fitantanana Ny Bilaogy Ny Filohan’ny Loholona · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 29 Septambra 2012 5:05 GMT 1	 · Mpanoratra Mong Palatino Nandika Lauren RAJAOBELINA
Sokajy: Azia Atsinanana, Filipina, Fahalalahàna miteny, Fitantanam-pitondrana, Lalàna, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Politika
Ny Filohan'ny Loholona any Filipina Juan Ponce Enrile dia nilaza fa tsy mahalala na inona na inona momba ny bilaogy na ny miserasera amin'ny bilaogy nefa nanome tolo-dalàna hamehezana ny bilaogy  rehefa nitaraina ny namany iray ao amin'ny loholona fa niharan'ny fandrahonana tany amin'ny trano fanaovana aterineto ho an'ny daholobe (cyber). Maro no nihevitra fa famerana ny fahalalahan'ny aterineto ao anatin'ny firenena izany.
Mampahatsiaro ilay loholona mba hifantoka amin'ny resaka hafa i Shades of :
Inty misy soso-kevitra tsara ry loholona, nahoana no tsy lalàna ho an'ny mpaka tahaka no atao fa tolo-dalàna FANOHERANA BILAOGY ary rehefa tafiditra ao ianareo ahoana ny momba ny fanatsarana ny fototra ifampifehezana sy ny maha-izy azy ihany koa ?
Ny Filohan'ny Loholona Filipina Juan Ponce Enrile. Sary avy amin'ny Wikipedia
Manontany i Bong Mendoza raha voafakafaka tsara ny famehezana ny bilaogy politika :
Ahoana ny momba ny bilaogy politika ? Ahoana no hamehezana ireny ? Tokony ho ireny ve no hoehezina voalohany ? Voaaron'ny lalàna mikasika ny fahalalahan'ny fanehoan-kevitra ny Bilaogy. Tsy misy lalàna azo amehezana ny bilaogy manala baraka ve ? Raha toa ka misy bilaogera mihevitra ny hanongam-panjakana,tsy azo sokajiana ho isan'ny mpikomy ve izy ? Izany mihitsy, mahafinaritra ny bilaogera ny tsy filazana anarana avy any amin'ny cyber. Nefa na dia izany aza, tokony ho hitan'ny mpanadihady ny adresse IP-ny izany.
Mihanahana ny Filohan'ny Loholona Juan Ponce Enrile sady miaiky fa tsy mahay izay momba ny aterineto.Tsy fantany akory inona no atao hoe bilaogy. Heveriny fa tsangan-kevitra izany. Tsy manana bilaogy ho azy manokana izy. Ankehitriny nefa hitany tsotra izao ny ilàna ny lalàna hifehezana ny bilaogy.
Raha tanteraka io lalàna io, isika indray no voampanga. Isika angamba no firenena voalohany izay hanana lalàna famehezana ny bilaogy nataon'ny loholona.
Ny heloky ny Cyber , fa tsy blog, no tokony araha-maso  araka ny hevitr'i Sassy Lawyer:
Tsy haiko izay hanazavana azy. Niroborobo ny famoronana amin'ny aterineto satria tonga ho azy ny firoboroboana. Tsy misy fanelanelanana. Saingy tsy mahakasika azy ireo izany sa tsy izany ?…. Tsy ny bilaogy no mila fanaraha-maso, fa ny vaomieran'ny heloky ny cyber. Saika isan'andro no misy maka tahaka ny asako, eny na dia hatramin'ny gazety lehibe mpiseho isan'andro aza ( Bulletin, case in point ). Ary misiki-ponitra mihitsy aho mba hanakatonana ireo tranon-kala mpaka tahaka ireo,na fara-faha-ratsiny, mahazo ireo fitaovam-pangalarana nalaina avy amin'ny tranonkalan'izy ireo. Nefa inona no ataon'ny olona izay tsy manana traikefa amin'izany ho tahaka ny inona io na dia vao manomboka aza ny fahazahoana azy ?
Ampitovian'i Mula Sa Pilipinas amin'ny fanaraha-maso ny haino aman-jery ny volavolan-dalàna mikasika ny bilaogy :
Ny lalàna mikasika ny bilaogy ? tahaka ny amin'ny lalànan'ny tany misy hotakotaka indray : ” fanaraha-maso ny haino aman-jery”
Ny volavolan-dalàna manohitra ny bilaogy – izay ve no hitanareo fa tsara indrindra ? Amin'ny famerana ny zonay tsy hiteny izay rehetra tsapanay sy saininay ny amin'ny fomba fitantanan'ny rantsana telo ao amin'ny fitantanana ny firenena ? Tsaratsara kokoa aminareo ny manetry tena ary ho solon'io volavolan-dalàna adaladala fanoherana bilaogy io – dia tokony fanovàna ny foto-dalànantsika efa tranainy be mifehy ny Ady Heloka Bevava no ataonareo
Ny filohan'ny Loholona Enrile no iray amin'ireo nampiditra ny lalànan'ny tany misy hotakotaka teto amin'ny firenena teo anelanelan'ny 1972 sy 1981.
Ny hafatra  nomen'ny Vincenton Post ho an'ireo loholona : “Ialao ny aterineto ary ny fiaraha-monina ihany no atao bilaogy !”
Toa zavatra iray ihany no eken'ny fikambanan'ny mpanao lalànam-panjakana : ny soso-kevitra fanaraha-maso ataon'ny fanjakana amin'ny aterineto, tsy ny bilaogy ihany, fa ny tambazotra sosialy hafa ihany koa.
Notsipahako tamin-kery ny volavolan-dalàna momba ny Fahasalaman'ny Fananahana noho izy miendrika jadona sy manelingalina. Fa ity iray ity… ity soso-kevitra hamehy TSY ny bilaogy ihany fa ny aterineto iray manontolo ao Filipina dia tsy azo ekena.
Avelao ny Aterineto haka ny endriky ny fanjakany na ny fireneny !
Ilaozy ny Aterineto ary ny fiaraha-monina ihany no ‘ndao atao bilaogy !
Nipoitra io hevitr'i Enrile io rehefa nampangain'i Tito Sotto ho manao fanorisorenana azy ny mpiserasera amin'ny aterineto tao an-toerana tamin'ny fanoherany ny volavolan-dalàna momba ny Fahasalamana ara-Pananahana. Novalian'i Sotto ihany koa ny fiampangana azy ho naka tahaka bilaogera Amerikana tamin'ny kabary nataony momba ny loza ateraky ny fanabeazana aizana tsy voajanahary tamin'ny volana lasa teo.
Nohamafisin'i Stuart Santiago fa i Sotto no naneritery ny tsikerany :
sotto no ilay mahery setra, namely mafy anay avy any amin'ny loholona tamin'ny fampiasana ny fahefana. Sotto no ilay namely sy naneritery anay am-bava tamin'ity sehatra manokana ity, niampanga anay ho nametsifetsy, eny, hatramin'ny nilazany fa notakianay vola izy
ny tena tadiavin'i Sotto amintsika rehetra dia ny fanajanonana, fampiatoana, ny fanoherana azy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/09/29/38245/
 nanome tolo-dalàna hamehezana ny bilaogy: http://ph.news.yahoo.com/sotto-denies-pushing-anti-blogging-bill-070153948.html
 Mampahatsiaro : http://shadesofgray07.blogspot.com/2012/08/sotto-is-being-real-cyber-bully.html
 voafakafaka tsara : http://bongmendoza.wordpress.com/2012/08/30/regulating-blogs-in-the-philippines/
 araha-maso : http://shortandsweet.casaveneracion.com/2012/08/a-blogging-bill-of-all-things/
 Ampitovian'i : http://dalubhasangpinoy.wordpress.com/2012/08/30/tito-sotto-victim-of-cyber-bullying/
 naka tahaka : https://globalvoicesonline.org/2012/08/25/philippines-senator-accused-of-plagiarism/
 Nohamafisin'i : http://stuartsantiago.com/sotto-the-senate-the-pits-rh/